Susa Amatafula Asuka Kwizindalwazi Zokufinyelela - Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Access Repair Susa ukususa amatafula kusuka kulwazi lokufinyelela
Susa ukususa amatafula kusuka kulwazi lokufinyelela
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,502)
Lapho ususa amanye amatafula kusuka kulwazi lwakho lweMicrosoft Access (.mdb noma .accdb file) ngephutha futhi ufuna ukuwalulama, ungawasebenzisa DataNumen Access Repair ukuskena amafayela we-.mdb noma we-.accdb bese uthola amatafula asusiwe emafayeleni ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokubuyisa amatafula asusiwe kufayela le-Access mdb noma le-accdb nge DataNumen Access Repair, sicela uvale i-Microsoft Access kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela le-mdb noma le-accdb.
Chofoza “Izinketho” ithebhu, bese uqinisekisa “Buyisa amatafula asusiwe” inketho ihlolwe.
Khetha ifayela le-Access mdb noma le-accdb elizolungiswa:
Ungafaka igama lefayela le-mdb noma le-accdb ngqo noma chofoza ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha ifayela.
Ngephutha, DataNumen Access Repair izogcina imininingo egciniwe yokuFinyelela okuhleliwe kufayela elisha elinegama elithi xxxx_fixed.mdb noma i-xxxx_fixed.accdb, lapho i-xxxx igama lomthombo we-mdb noma we-accdb file. Isibonelo, ngefayela iDamaged.mdb, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizoba Damaged_fixed.mdb. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Access Repair intando start ukuskena nokubuyisa amatafula asusiwe kufayela lomthombo mdb noma le-accdb. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma amanye amatafula asemthonjeni womthombo we-mdb noma we-accdb engatholwa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
Manje usungavula i-mdb noma i-accdb database ehleliwe nge-Microsoft Access noma ezinye izinhlelo zokusebenza bese uhlola ukuthi amatafula asusiwe ayatholwa ngempumelelo.
lapho ungachofoza khona inkinobho ukubona umbiko oningiliziwe wawo wonke amatafula, izinkambu, amatafula, ubudlelwano nezinye izinto ezitholakele, kanjena:
Kepha inguqulo yedemo ngeke ikhiphe ifayili elilungisiwe. Ngiyacela oda okufushane umnyuziki ukuthola ifayela elilungisiwe.